:Bọchị: Disemba 28, 2019
Ngwuputa mbu maka oru ugbo agha Corum High Speed ​​ka ewe buru osochu na 2021
Çorum zutere ndị mukhtars nke AK Party osote Kavuncu Kavuncu, Kirikkale Corum, Corum Merzifon, Merzifon Samsun n'okporo ụzọ ụgbọ elu dị elu na 2021, kwuru na nke mbụ gbara. Çorum chọrọ ụgbọ elu [More ...]
Minister Turhan: Ọ bụrụ na emeghị ọwa ahụ na Istanbul, nke a ga-arụgide anyị
Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa nke Republic of Turkey, gara Gọvanọ mgbe ọ tụlechara owuwu ụzọ mgbaaka ahụ na ọnọdụ Çankırı Kenbağ. Gọvanọ Hamdi Bilge Aktaş nabatara Turhan, bịanyere aka na akwụkwọ nsọ gọvanọ. Çankırı [More ...]
TÜDEMSAŞ Deans nke ikike nke teknụzụ kwadoro
13. Ndị otu na ndị na-ahụ maka ọrụ bịara na Sivas maka nzukọ nke Council Deans Council of Teknụzụ ikike gara na mpaghara mmepụta nke T areasDEMSAŞ. Rector nke Sakarya University of ተግባራዊ Sciences. Dr. Mehmet Sarıbıyık mere nzukọ mbụ nke nzukọ ahụ [More ...]
Ego tiketi East Express 2020: ọkachasị ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto, East Express na-apụ na Ankara wee rute Kars site Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan na Erzurum. Nkeji 5 - nkeji iri n’ọdụ ụgbọ oloko [More ...]
DAP Yapi Ga-eji arsgbọala Injin dochie ụgbọala
Turkey kasị ukwuu emeputa nke residential ụlọ dị n'etiti DAP ka ihe atụ, ụlọ ọrụ na-enweta a itunanya. DAP, nke ga-aga n'ihu na-akwado akụ na ụba Turkey ya na ụgbọ ala ụlọ ewepụtara ya na emume dị egwu [More ...]
Instlọ ọrụ na-ahụ maka ego na-arịọ nkwa ego maka Mersin Metro
Onye isi obodo Mersin Metropolitan Mun Vahap Seçer gara Ball nke afọ 28th nke Mersin Industrialists na Association nke Ndị Mmekọ (MESİAD) na Berdan Bolt nke 41 nke Gala Night. Gbọ elu maka njem na azụmaahịa na Mersin [More ...]
Kayseri na-achọ maka Mmepụta 38th nke Cars National
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Mamdouh Büyükkılıç'ın, President nke Republic of Turkey bụla ẹkenam ke a ememe na Gebze, Turkey si Recep Tayyip Erdogan gakwara anụ ụlọ automakers, ọ sịrị mpako. President Büyükkılıç, otú Turkey dị ike [More ...]
Erciyes ga-abụ ebe ntụrụndụ n’afọ Afọ Ọhụrụ
Erciyes, nke bụ otu n'ime ụlọ asọmpi sọọsọ kachasị mkpa n'ụwa niile na ntinye ego nke Kayseri Obodo ukwu, na-aga n'ihu na-anabata ndị ọbịa ụlọ na ndị si mba ọzọ. N’izu gara aga, ụgbọ elu ndị agha si Poland jiri Russia na Ukraine rute mmadụ ise. [More ...]
Autgbọ ala ụlọ ga-agbakwunye ike na ụlọ ọrụ Bursa
Bursa Mayor Alinur Aktas, a ga-emepụta ụgbọ ala obodo na nke mba na ndị nta akụkọ Gemlik'te kwuru nkwupụta. Bursa, ebe mkpebi siri ike a ga-abụ isi mmalite nke Onye isi ala ụgbọ ala eletrik na nke mba [More ...]
MMI na-ekwupụta ndị ọrụ ruru eru ka ha bụrụ ndị ọrụ na onye ọrụ ha
Ekwuputara nsonye nke ndị ọrụ afọ ofufo dị 420 nke IMM. Ndi gụsịrị akwụkwọ n’ime ndị a gụpụtara ahọpụtara n’usoro ngụsị akwụkwọ ngụsị akwụkwọ a, ka e kpebisiri ike iji nyocha ọnụ ha n’abali Disemba 20-26. N'ime ihe owuwu Obodo Obodo Istanbul (IMM) [More ...]
Ọ bụrụ na ọwa na-eme na Istanbul, anyị agaghị enwe ike ịga leta ili ndị nna nna anyị
Ndị bi na Baklalı nso nke Arnavutköy, nke mmiri ga-ejupụtakwa ma ọ bụrụ na ọwa ga-eme na Istanbul, na-enwe nchegbu maka njem nke alaili ahụ. Obi adịghị ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ahụ na ebe a na-eli ozu na mpaghara Kanal Istanbul ga-akwali. Ukwuu Istanbul [More ...]
İZTAŞIT Ha si Seferihisar pụọ
İZTAŞIT siri na Seferihisar pụọ. Oru ngo a, nke gunyere ndi no na uzo ikwado ugboala, nke n’enwe obere nke mbere, nye ndi netiti njem njem nke Izmir, ka aga atinye ya n’obodo Izmir nile gbara ya gburugburu. Obodo Izmir nke dị na mpụga etiti obodo [More ...]
IZBAN na Metro ga-arụ ọrụ ruo ụtụtụ
İzmir ga-abanye na Ozan Doğulu n'afọ ọhụrụ. A ga-amalite ime egwu a na Cumhuriyet Square na 22.30. A ga-ahazi ọrụ ụgbọ njem ọha ruo Afọ Ọhụrụ. Obodo İzmir mepere emepe emeela mmemme ikpeazụ ya maka mmemme Afọ Ọhụrụ. [More ...]
Sivas ga-abụ anlọ Ọrụ Etinye ma Na-adọta Ọzụzụ na Nnukwu Ọsọ
Sivas Cumhuriyet University Ngalaba nke Economics na Nchịkwa Sciences Ngalaba Akụ na ụba. Dr. Ahmet Şengönül kwuru, Sivas na Okporo Ọgba Dị Anya, Sivas ga-abụ ebe nlegharị anya na akụ na ụba obodo ga-abụ pasent 14. [More ...]